१ नम्बर प्रदेशको बजेटः यस कारण हुँदैन कार्यान्वयन (विशेष अन्तरवार्ता) - arthamandu
गृहपृष्ठ १ नम्बर प्रदेशको बजेटः यस कारण हुँदैन कार्यान्वयन (विशेष अन्तरवार्ता)
१ नम्बर प्रदेशको बजेटः यस कारण हुँदैन कार्यान्वयन (विशेष अन्तरवार्ता)
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रदेश नम्बर एकले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाको बजेट सार्वजनिक ग¥यो । शुक्रबार विराटनगरस्थित प्रदेश सभा भवनमा आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले सार्वजनिक गरेको बजेट कुल विनियोजन मध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ९२ करोड १८ लाख रुपैया, पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैया रहेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको पहिलो बजेट कार्यानवयन कत्तिको हुन्छ त भन्ने विषयमा यतिबेला टिकाटिप्पणी शुरु भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुने सम्भावना कत्तिको छ भन्ने विषयमा प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छः
प्रदेश सरकारका तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रस्तुत गर्नु भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई तपाई र तपाईको पार्टीले कसरी लिएको छ ?
हाहाहाहाहा (लामो हासो) बजेटलाई नराम्रो भन्न सकिदैन, बजेट एकदम राम्रो आएको छ । प्रदेश नम्बर एक स्वर्ग बन्ने नै बजेट आएको छ । बजेट राम्रो भएर मात्रै के गर्नु पैसा छैन । पैसा नभईकन ल्याएको बजेटको के अर्थ ? कागजमा मात्रै लेखेर हुनेवाला केहि छैन । कागजमा लेखेकै भरमा भन्ने हो भने बजेट राम्रै छ, तर यथार्थ कुरा गर्ने हो भने श्रोत बिनाको पैसा नभएको बजेटको केहि अर्थ छैन ।
प्रदेश सरकारले पहिलो पटक ल्याएको बजेट कार्यान्यन कत्तिको हुने सम्भावना देख्नु भएको छ ?
कागजमा लेखेरै मात्रै हुँदैन । यो बजेट कार्यान्वयनको सम्भावना अत्यन्तै कम छ । म सिधै यति भन्न सक्छु कि यो कूल बजेटको १५ प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुँदैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको १५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भयो भने पनि सरकारलाई सफल मान्न सकिन्छ ।
३५ अर्ब भन्दा बढीको बजेट सरकारले ल्याएको छ, तपाईले १५ प्रतिशत मात्रै पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु भयो । १५ प्रतिशत पनि कार्यान्यन नहुने केहि त्यस्ता आधारहरु छन् ?
१५ प्रतिशत पनि बजेट कार्यान्वयन नहुने प्रष्ट आधारहरु छन् । आधार भएर नै मैले भनेको हो । बजेट कार्यान्वयनका लागि पैसा चाहिँन्छ, तर पैसा छैन । अब पैसा नै नभए पछि बजेट चाहिँ कसरी कार्यान्वयन हुन्छ त ? पैसा थोरै छ, तर कनिका छरे जस्तो बजेट धेरै छरिएको छ । बजेटलाई पिठो जस्तो पिसेर पिठोको रेखी लगाउने जस्तो देखियो ।
कृषि, पर्यटन लगायतका विषयमा धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन्, यसले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन मद्दत पुग्ला नि ?
पर्यटन क्षेत्र भनेर ८९ करोड बजेट छुट्याइएको छ । पर्यटनका लागि भनेर प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि लिएर, हेलिप्याड, ४÷५ वटा एयरपोर्ट बनाउने साथै माउन्टेन फ्लाइटको व्यवस्था लगायका विषयहरु समेटिएका छन् । पर्यटनका क्षेत्रमा धेरै कुराहरु समावेश गरिएको छ । पर्यटनका क्षेत्रहरुमा अति नै धेरै योजनाहरु समावेश गरिएको छ, बजेट चाहिँ कति रहेछ त भनेर हेरेको जम्मा ८९ करोड रुपैयाँ रहेछ । त्यो बजेटले त्यति धेरै आयोजना निर्माण सम्भव छैन ।
उता कृषिलाई बजेटले एक नम्बरमा राखेको छ । कृषिलाई एक नम्बरमा राखेर यति धेरै सेवा सुविधाहरु दिने भनेका छन् जुन कुरा एकदमै गाह्रो छ । दिन्छु भनेर मात्रै हुँदैन दिनपनि सक्नु परो नि । कृषिका क्षेत्रमा पनि त्यतिका धेरै योजनाहरु समेटिएका छन् । तर बजेट जम्मा ८५ करोड रुपैयाँ राखिएको छ । सबैभन्दा बढी चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा राखिएको छ । सरकारले जहाँ टेण्डर, कमिशन आउने ठाउँ छ त्यहाँ बढी बजेट राखेको छ ।
करिब ३६ अर्बको बजेट सरकारले ल्याएको छ । त्यो ३६ अर्बमा ३ अर्ब राजश्वबाट आउने अनुमान गरिएको छ । राजश्वबाट ६ र्ब आउछ कि १ अर्ब आउने भन्ने कुरा हाम्रो अनुभव नभएका कारण ज्ञारेन्टी छैन । अहिले त हामी शुन्यमा छौं, भर्खरै जन्मेका हौं । ३ अर्ब राजश्व आउछ र २२ अर्ब अनुदान आउछ भन्ने सोचिएको छ । केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अस्ति जम्मा १९ अर्ब दिएको थियो । १९ अर्बमा १३ अर्बको चाहिँ एक लाख रुपैयाँसम्मको बजेट बनाएर कार्यक्रम नै पठाइएको छ । बाँकी रहेको ६ अर्बले ३६ अर्बको बजेट भाषण गरिएको छ । अब कसरी ३० अर्बको काम गर्ने ! यहाँ समस्या छ ।
बजेटप्रति तपाईको थप भनाई केहि छ ?
मैले सत्तामा रहनु भएका साथीहरुलाई पनि भनेको छु सपना बाड्ने काम नगरौ भनेर । सपना बाड्नाले हामी बद्नाम हुन्छौं भनेर मैले सचेत गराएको पनि हुँ । हिजो नेताहरुले नेपाललाई सिंगापुर बनाउछौ, स्वीजरल्याण्ड बनाउछौं भने जसका कारण हामीले भोट माग्दा गाली खानु पर्यो । अहिले प्रदेशको बजेटले पनि स्वर्ग बनाउछु भनेको छ । मेरो भनाई जे बनाउछ सक्छौ त्यो मात्रै भनौ । जनतालाई सपना नबाडौं । सरकार दुई तिहाई बहुमतको छ तर ६ महिनामात्रै टिक्ने जस्तो गरेर अहिले नै सकौं जस्तो गरेर बजेट ल्याउनु भएको छ । मध्यान्ह राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित ।
पछिल्लाे - पाँचौ पटक तोकियो अस्थायी शिक्षकको परीक्षा
अघिल्लाे - नागरिकको स्वास्थ्य प्राथमिकतामा : मन्त्री थापा